DFS oo Ciidamo Cusub u diyaarisay Al Shabaab +SAWIRO |
DFS oo Ciidamo Cusub u diyaarisay Al Shabaab +SAWIRO
Saraakiisha Ciidamada Xooga Dalka Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika ee AMISOM ayaa tababaro kala duwan waxey siiyeen Dhalinyaro badan kuwaasi oo loogu talagalay in ay ka shaqeeyaan amaanka iyo ka hortaga Al Shabaab.
Ciidamada Cusub ayaa isugu jira Rag iyo Dumar iyagoona kuwaasi oo loo qosheeyay Xaqiijinta amaanka Magaalada Marka ee Xarunta Gobolka Sh.Hoose kadib markii Dilal iyo Qaraxyo ay ku soo laabteen Gobolka Sh.Hoose.
Wasaxaafaeed kooban oo ka soo baxay Taliska Midowga Afrika ee AMISOM ayaa lagu sheegay in Saraakiisha Dowladda iyo kuwa AMISOM ay iska kaashan doonaan Tababarida Dhalinyarada Gobolka Sh.Hoose si looga hortago Falalka amaanka ka baxsan ayaa lagu yiri.
Waxaa ugu dambeyn Gobolka Sh.Hoose ka socda Howlgallo ay wadaan Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM kuwaasi oo looga soo horjeeda ama lagu sifeenayo Dagaal; yahanada Ururka Al Shabaab.